'दुई नम्बर प्रदेशमा एमाले चौथो... :: भानुभक्त :: Setopati
'दुई नम्बर प्रदेशमा एमाले चौथो पार्टी हुन्छ'
एमाले छोडेर माओवादी प्रवेश गरेका नेता रामचन्द्र झा संविधान जारी भएसँगै बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा लागे। हालै उनी नयाँ शक्ति छोडेर फेरि माओवादी फर्किएका छन्। यसबीच उनी एमाले फर्कने चर्चा पनि चलेको थियो।
यही सन्दर्भमा हामीले नयाँ शक्तिमा उनको अनुभव तथा माओवादी र एमालेप्रति उनको बुझाइबारे कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ झासँग सेतोपाटीका रोहेज खतिवडाले गरेको कुराकानी:
बाबुराम भट्टराईसँगको लामो सहकार्य तोडेर फेरि माओवादी प्रवेश गर्नुभयो। किन?
संविधान सभाबाट संविधान बन्ने क्रममा प्रचण्डजीसँग केही मतभेद सिर्जना भयो। उहाँ कांग्रेस-एमालेसँग सम्झौता भइसक्यो, अब केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्न थाल्नुभयो। मधेसमा परिस्थिति अर्कै थियो। दर्जनौं मान्छे मारिएका थिए, महिनौं आन्दोलन चलिरहेको थियो। यही मतभेदमाझ हामीले माओवादी छोडेका थियौं।
त्यसपछि बाबुरामजीसँग भेटघाट भयो। उहाँले वैकल्पिक शक्ति बनाऔं भन्नुभयो। त्यसका सैद्धान्तिक कुराहरू माओवादीसँग आनका तान फरक थिएन। त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू केही भिन्न थिए। बाबुरामजीका केही भिजन पनि मलाई उचित लागेका थियो। जस्तै, नेपाललाई तीन क्लस्टरका रूपमा बुझ्ने, विकासका बारेमा नयाँ धारणा बनाउने, मार्क्सवाद र समाजवादका बारेमा नयाँ धारणा बनाउने, पार्टीको नयाँ किसिमको संरचना बनाउने। यी विषयमा छलफल हुँदै जाँदा मैले बाबुरामजीलाई विश्वास गरेँ।
यसपछि हामी नयाँ शक्तिको संगठन निर्माणमा लाग्यौं। नयाँ शक्तिको सबैभन्दा राम्रो संगठन दुई नम्बर प्रदेशमा नै थियो। त्यो मेरै योगदानका कारण हो। जेठ ३१ गते दशरथ रंगशालामा कार्यक्रम हुँदासम्म म नै प्रदेश इन्चार्ज थिएँ। त्यसपछि मलाई सहसंयोजक बनाउनुभयो।
यहाँसम्म ठीकै थियो। जब दशरथ रंगशालाको कार्यक्रम सकियो, त्यसपछि पार्टी कब्जा गर्ने खेल सुरू भयो। मानौं कि पार्टी बनिसक्यो, अब वैधानिक रूपमा कसरी कब्जा गर्ने र भोलिका लागि प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने भन्नेतिर ध्यान गयो।
मेहेनत गर्नु छैन। संगठन गर्नु छैन। पहाडमा भएको दुई चरणको चुनाव हेरौं न। बाबुरामजीकै जिल्ला गोरखामा पार्टीको लज्जास्पद हार भयो। उहाँहरूले आफ्नो प्रभाव त देखाउनुपर्थ्यो।
मैले पहिलो चरणको निर्वाचन पहिले नै बाबुरामजीलाई भनेको थिएँ, 'तपाईं एक वर्षदेखि जे तौरतरिका अपनाइरहनु भएको छ, त्यसमा मेरो गम्भीर असहमति छ।'
केजरीवालजस्तो आइहाल्छु कि भन्ने उहाँको सोचाइ थियो। म उहाँसँग सहमत थिइनँ। मेरो लामो अनुभवले भोट ल्याउन जनस्तरमा व्यापक संगठन आवश्यक छ भन्छ।
कि पार्टीको संगठन व्यापक बनाऔं कि अरू विचार मिल्ने पार्टीसँग एकता गरौं भनेको थिएँ। यही क्रममा उपेन्द्र यादवजीसँग एकताको कुरा सुरू भयो। दस्तावेजमा सबैकुरा मिल्यो। नेतृत्वका बारेमा बाबुरामजी र उपेन्द्रजी बसेर टुंग्याउनु थियो। यही बेला बाबुरामजीले परिषद्को बैठक बोलाइहाल्नु भयो। यो बैठकपछि बाबुरामजी पनि अलि झस्किनु भयो। पार्टी अध्यक्ष कुनै पनि हालतमा नछोड्ने भन्न थाल्नुभयो। पार्टी एकता नहुनुमा उपेन्द्रजीको कमजोरी ४० प्रतिशत छ भने ६० प्रतिशत बाबुरामजीकै हो।
यसपछिको कार्यकारिणी बैठकमा मैले भनें, 'वार्ता भङ्ग गर्ने र एकता नगर्ने तपाईंको निर्णय म मान्दा पनि मान्दिनँ र अब तपाईंसँग सहकार्य गर्न पनि सक्दिनँ।'
त्यसपछि मैले नयाँ शक्ति छोडेँ।
नयाँ शक्ति छोडेपछि एमालेसँग पनि तपाईको छलफल भइरहेको थियो। तर माओवादीमा नै फर्किने निर्णयमा कसरी पुग्नुभयो?
मसँग रहेका कार्यकर्ताहरूले एमालेमै फर्किनुस् भनेर दबाब दिइराख्या थिए। एमालेमा ३५ वर्ष लगानी गर्नुभएको छ, उतै जाउँ भन्ने दबाब थियो। एमालेलाई तराईमा स्थापित गर्ने म नै हुँ। यो हिसाबले पनि कार्यकर्ताको दबाब स्वभाविक थियो। एमाले नेताहरूलाई पनि उहाँहरूले दबाब दिनुभयो।
एमाले नेताहरूले फोन पनि गर्नुभयो। पटकपटक कुराकानी भयो। तर राजनीतिक विषयमा उहाँहरू कुरै गर्न नचाहने। मैले जे मतभेदका कारण पार्टी छोडेको थिएँ, त्यसमा त छलफल हुनुपर्‍यो नि।
हाम्रो समुदाय वा उत्पिडित जनतालाई सम्मान गरिएन भने मलाई सम्मान गर्नुको के अर्थ छ। उहाँहरूले राजनैतिक मुद्दामा छलफल गर्न नचाहेको बेला प्रचण्डजीले पहल गर्नुभयो। राजनीतिक हिसाबले मलाई माओवादीमा नै सहज छ, हाम्रो समुदायको सम्मान र हितका निम्ति एमालेभन्दा माओवादी नै उचित पार्टी थियो। म त्यहाँ फर्किएँ।
पहिले माओवादी छोड्दा प्रचण्डसँग तपाईंको मतभेद थियो। त्यो कसरी हल भयो त?
ती फरक मत उहाँले यसबीचमा हल गरिसक्नुभयो। एमालेको 'एक्सट्रिम' बिन्दुबाट उहाँ फर्किनुभयो। बीचमा यत्तिका समय संविधान संशोधनका लागि काम गर्नुभयो।
अर्को कुरा पार्टीलाई बदल्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। परम्परागत ढंगले कम्युनिष्ट पार्टी चल्दैन भन्ने पनि बुझ्नुहुन्छ। यसमा पनि उहाँले संस्थागत रूपमा छलफल चलाइरहनु भएको छ।
तपाईंले केही समय बाबुरामजीसँग निकट रहेर बिताउनुभयो। अब नयाँ शक्ति र बाबुरामजीको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला?
हेर्नुस्, म बाबुरामजीको निन्दा गर्न चाहन्नँ। उहाँ प्रखर विद्वान हो। नेपालको विकासका लागि उहाँसँग राम्रै योजना छ। विश्वनीयता पनि आर्जन गर्नुभएको छ। उहाँको छेउछाउको कुरा म गर्दिनँ तर उहाँ व्यक्तिगत रूपमा इमान्दार हुनुहुन्छ। तर उहाँसँग व्यवस्थापकिय क्षमता त्यति छैन। यसमा उहाँ अलिक कमजोर हुनुहुन्छ।
तत्कालै कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेक अरू पार्टीलाई स्थान दिने नेपाली जनताको मुड देखिँदैन। अझै केही वर्ष यसमा परिवर्तन पनि नआउला। तर बाबुरामजी नेपाली राजनीतिमा निष्प्रभावी व्यक्ति होइन।
तपाईं, देवेन्द्र पौडेल लगायत धेरैले पार्टी छोड्नुभयो। उहाँ अझ एक्लिँदै जानुभएको छ। यसरी उहाँले सोचेजस्तो पार्टी बन्ला?
हेर्दै जाउँ। यस विषयमा उहाँलाई नै मन दुख्ने गरी किन बोल्नु? मेरो त चित्त बुझेन। हेर्दै जाउँ।
तपाईं एमालेमा रहँदा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा सिनियर नेता, पार्टीमा राम्रो स्थान बनाइसक्नुभएको मान्छे। पार्टी फेरबदलले तपाईंको राजनीतिक व्यक्तित्व कमजोर बनेको छ भन्ने अनुभूत गर्नुभएको छ?
एमालेमा पूरा जिन्दगी लगाएँ। संविधान बनाउने बेलामा आफूले पहिले गरेकै निर्णयबाट उहाँहरूले फन्को मार्नुभयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा पद दिने तर मेरो समुदाय वा देशभरकै उत्पीडित समुदायको अधिकारको कुरामा नकारात्मक हुने, यो त उचित भएन नि। व्यक्तिगत पदकै लागि त मलाई एमाले सहजै थियो। तर राजनीति त व्यक्तिगत लाभ हानी मात्रै होइन। म जुन समुदाय वा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसको हितमा काम गर्न सक्ने हो।
पार्टी बदले पनि म कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै हो। म कम्युनिष्ट पार्टीकै रिङभित्र छु। यो कुनै खास पार्टी बदलाई नै होइन।
मैले लाभका लागि होइन, मुद्दाका लागि पार्टी बदलेको हुँ।
संविधान संशोधन संसदबाट पारित हुन सकेन। अब मधेसको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ?
कस्को कारणले संविधान संशोधन हुन सकेन भन्ने मधेशी जनताले अब बुझेको छ। त्यसको विरूद्ध उनीहरूले मतदान गर्छन्।
हिजो मेरो गोडामा अल्झो लागेर एमालेविरूद्ध धेरै काम गर्न सकिनँ। अब मेरो गोडामा अल्झो लाग्दैन। म फ्री हुन्छु र अफेन्सिभ्ली म खट्छु। त्यसपछि जनताको माझमा एमालेका नेताहरू कसरी कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुछ।
एमालेका जोसुकै नेताहरूसँग जत्तिको प्रभावकारी वक्तृत्वकला मसँग पनि छ। यसमा केपी ओली, माधव नेपाल कोहीभन्दा पनि म कमजोर छैन। म एमालेका हरेक नेतालाई टक्कर दिनसक्छु। जनतालाई कन्भिन्स गर्ने क्षमता मसँग उहाँहरूको जत्तिकै छ। हेर्दै जानुस्, अब दुई नम्बर प्रदेशमा एमाले चौथो पार्टी हुन्छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ ८, २०७४, ०१:१२:२०